Taorian'ny fanesorana azy ireo tamin'ny trano teny amin'ny campus. Maro amin'izy ireo no tsy nanana haleha ka mivondrona amina toerana iray eny Ambohimandamina. Toy ny hita amin'ny sary, an-jatony ireo mpianatra no matory sy miara-misakafo eo amin'io fefy natsangana sy nasiana tafo io.
Misy ilay antsoina hoe : Répondant, olona natao mandray ireo mpianatra monina eto Mahajanga raha sendra misy ny olana. Ny zava-misy anefa , mpianatra am-polony no misoratra amina olona hivantanana iray. Tsy afa-manana fahafahana handray olona marobe ilay répondant hikambanam-be.
Nanambara ny tompon'andraikitry ny oniversite fa tsy ho ela dia hiverina ny fampianarana. Tsy avy hatrany anefa dia miverina amin'ny tranony, manaraka izay, ireo mpianatra fa miandry ny fanaboarana ny simba sy ny fandaminana rehetra.
vendredi, 08 décembre 2017 22:02
vendredi, 08 décembre 2017 17:11
mercredi, 06 décembre 2017 08:37
mardi, 05 décembre 2017 06:13
lundi, 04 décembre 2017 10:05
lundi, 04 décembre 2017 09:29
lundi, 04 décembre 2017 07:34
dimanche, 03 décembre 2017 13:27
samedi, 02 décembre 2017 11:34
samedi, 02 décembre 2017 05:15